अर्थ/विकास – जलजला अनलाइन
बैशाख ६, काठमाण्डौ । काठमाण्डौबाट भारतको नयाँ दिल्लीसहित अन्य ठाउँ जाने यात्रुहरुले हवाई टिकट पाउन छाडेका छन् । भारतीय विमानसेवा कम्पनी जेट एयरवेजले आफ्ना उडान अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरेसँगै नेपालबाट भारतका विभिन्न स्थानमा जाने यात्रुहरुले हवाइ टिकट पाउन छाडेका हुन् । उडान स्थगित हुनुअघि जेट एयरले नेपालबाट हप्ताको ३५ वटा उडान गर्दै आएको थियो […]
Posted on April 19, 2019 Author जलजला अनलाइन	Comments Off on जेट एयरवेज बन्द भएपछि देखियो यस्तो चमत्कार, अब के होला ?
ट्याक्सी चढ्ने हो ? अब ५ मिनेटमै यसरी आउँछ ट्याक्सी घरमा
बैशाख ४, काठमाडौं । उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजले पछिल्लो दिनमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई अंगिकार गर्दै मोबाइल एप्समा आधारित सेवा दिने भएको छ । उपत्यकाका ५ हजारभन्दा बढि स्वरोजगार ट्याक्सी चालकहरुको समाजले आफ्ना यात्रुहरुलाई प्रविधिमा आधारित हुँदै ट्याक्सी सेवा शुरु गर्ने भएको हो । समाजले मोबाइल एप्स ‘इजी ट्याक्सी नेपाल’ मार्फत वैशाख दोस्रो […]
Posted on April 17, 2019 Author जलजला अनलाइन	Comments Off on ट्याक्सी चढ्ने हो ? अब ५ मिनेटमै यसरी आउँछ ट्याक्सी घरमा
अब बुटवल–नुवाकोट केबुलकारमा सरर
चैत ३०, बुटवल । बुटवलदेखि पाल्पाको नुवाकोट गढीसम्म सञ्चालन हुने केबुलकार निर्माणको काम २ महिना भित्र सुरू हुने भएको छ। यो खबर भगवती पाण्डेले सेतोपाटीमा लेखेकी छन् । लामो समयदेखि सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेको सिद्धार्थ केबुलकार प्रालिले अबको दुई महिना भित्र काम सुरू गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृत पाएसँगै अब काम सुरु गर्ने […]
Posted on April 13, 2019 Author जलजला अनलाइन	Comments Off on अब बुटवल–नुवाकोट केबुलकारमा सरर
अर्थ/विकास पत्रपत्रिकाबाट मुख्य समाचार
अब दाङदेखि प्युठानको स्वर्गद्वारीसम्म केबुलकारमा सरर…
चैत २३, दाङ । दाङको घोराहीदेखि छिमेकी जिल्ला प्युठानको स्वर्गद्वारीसम्म केबुलकार निर्माणको प्रक्रिया सुरू भएको छ । यो खबर नारायण खड्काले सेतोपाटीमा लेखेका छन् । नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय स्थल प्युठानको स्वर्गद्वारीसम्म पुग्ने तीर्थयात्रु तथा पर्यटकको सुविधाको लागि निजी क्षेत्रले केबुलकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। दाङका झण्डै तीन दर्जन व्यवसायी मिलेर घोराहीदेखि प्युठानको स्वर्गद्वारीसम्म […]
Posted on April 6, 2019 April 6, 2019 Author Comments Off on अब दाङदेखि प्युठानको स्वर्गद्वारीसम्म केबुलकारमा सरर…
चैत ८, दाङ । दाङका बिभिन्न स्थानमा आगलागी हुँदा ३७ लाख बराबरको क्षति भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार दाङको राजपुर, बंगलाचुली, घोराही र तुलसीपुरका बिभिन्न स्थानमा आलगाी हुँदा ३६ लाख ९९ हजार बराबरको क्षति भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक बिनोद बिक्रम शाहका अनुसार बिहीबार र शुक्रबार गरि […]
Posted on March 22, 2019 Author Comments Off on दाङका बिभिन्न स्थनमा आगलागी हुँदा करिब ३७ लाख क्षति
फागुन २४, काठमाडौं । सरकारले ७ सिटे (६+१) हेलिकप्टोरबाट बेन्च सिट हटाउन सुरु गरेको छ । पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी चढेको यस्तै हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हलिकोप्टरबाट बेन्च सिट हटाउन कम्पनीहरुसँग सहमति गरेको छ । त्यसैका आधारमा केही कम्पनीहरुले बेन्च सिट हटाइसकेका छन् । प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार एएस ३५०को ६+१ सिटवाला हेलिकोप्टरलाई […]
Posted on March 8, 2019 Author Comments Off on हेलिकोप्टरबारे आयो यस्तो नयाँ नियम, के दुर्घटना कम होला ?
शुक्रबार मलेसिया, कतार, दुबई, साउदीसहित सबै देशको पैसाको भाउ बढ्यो (सुचिसहित)
फागुन १०, काठमाण्डौ । रियाल, रिगिंट, दिर्हाम, दिनार लगायत आज सबै विदेशी मुद्राको भाउ बढेको छ । तर कोरियन वनको मूल्य भने घटबढ भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार लागि अमेरिकी डलर १ को खरिददर ११३ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ३१ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ११३ रुपैयाँ ४८ पैसा […]
Posted on February 22, 2019 Author Comments Off on शुक्रबार मलेसिया, कतार, दुबई, साउदीसहित सबै देशको पैसाको भाउ बढ्यो (सुचिसहित)
अस्ट्रेलियामा दुई नेपाली नर्सले सञ्चालन गरे नर्सिङ कलेज, नेपाली पनि पढ्न जान सक्ने
सिड्नी । अस्ट्रेलियामा क्रियाशील दुईजना नेपाली नर्सले नर्सिङ कलेज सञ्चालन गरेका छन् । नेपालीहरुको बाक्लो बस्ती रहेको दक्षिण सिड्नी क्षेत्रको सदर्ल्याण्डमा झन्डै तीन दशकअघि खुलेको अस्ट्रेलियन नर्सिङ तथा ट्रेनिङ सिभिसेजको स्वामित्व लिएर उनीहरूले सञ्चालन गरेका हुन् । नेपालको बाग्लुङकी राधिका शर्मा र काभ्रेकी उषा नेपाल दुवै अस्ट्रेलियाका स्थापित नेपाली नर्स हुन् । तीन वर्षको अन्तरमा […]
Posted on February 18, 2019 Author Comments Off on अस्ट्रेलियामा दुई नेपाली नर्सले सञ्चालन गरे नर्सिङ कलेज, नेपाली पनि पढ्न जान सक्ने
बिदेशी पैसाको भाउ केही बढ्यो, कुन देशको कति छ? (सुचिसहित)
फागुन ६, काठमाण्डौ । आइतबार कुवेती दिनारको भाउ बढेको छ भने अमेरिकी डलरसहित रियाल, रिंगिट, दिर्हाम, कोरियन वन र बहराइन दिनारको भाउ बढेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार लागि अमेरिकी डलर १ को खरिददर ११३ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ २६ पैसा तोकेको छ । यस्तै साउदी रियाल १ को खरिददर ३० […]
Posted on February 18, 2019 Author Comments Off on बिदेशी पैसाको भाउ केही बढ्यो, कुन देशको कति छ? (सुचिसहित)
आज पनि सबै विदेशी पैसाको मूल्य बढ्यो, कुन देशको कति ? (सुचीसहित)
फागुन ३, काठमाण्डौ । शुक्रबार पनि डलरसहित विदेशी मुद्राको भाउ बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार लागि अमेरिकी डलर १ को खरिददर ११३ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ १६ पैसा तोकेको छ । बिहीबार डलरको खरिददर ११२ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ५८ पैसा थियो । यस्तै साउदी रियाल १ […]
Posted on February 15, 2019 Author Comments Off on आज पनि सबै विदेशी पैसाको मूल्य बढ्यो, कुन देशको कति ? (सुचीसहित)